Heshiiska qoraalka ah utbildningskontrakt waxaad ku heli kartaa kartid aqoon- iyo khibradeed oo dugsi sare oo aad ku heleysid waxbarashada dadka waaweyn ama dugsi shacbi oo dadka waaweyn ah. Waqtiga fog waxay taasi kordhineysaa fursadahaaga ku aaddan in aad shaqo heshid. Heshiiska waxbarashadu waa heshiis u dhexeeya adiga, annaga iyo degmada aad ka tirsantihid. Waxaad waxbarashada la wadan kartaa shaqo, tababar shaqo ama barnaamij kale oo waqtiga qaarkiis ah.
Waxaad lahaan kartaa heshiis waxbarasho ilaa aad ka buuxisid 25 sano ama ilaa aad ka dhameysid waxbarashadaada dugsiga sare.
Heshiis waxbarasho waxaa loogu tala galay adigaaga u baahan in aad yeelatid karti aqoon- iyo khibradeed oo dugsi sare ah. Waxaad u baahantahay in aad shaqadoon ahaan nooga ag qorantihid. Waxaad u baahantahay sidoo kale in aad buuxisid waxyaabaha soo socda:
waa in aad jirtaa 20-24 sano
waa in aadan haysan waxbarasho dugsi sare oo buuxda
waa in aadan ka qeyb qaadan etableringsprogrammet
waa in aad deggantihid degmo ay ka jiro heshiis wada shaqeyn oo u dhexeeya Xafiiska shaqada iyo degmada.
Nala soo xiriir ama la xiriir wadda ku hage xagga shaqada-iyo waxbarashada ah oo degmadaada ah haddii aad rabtid in wax dheeraad ah ka ogaatid heshiiska waxbarashada. Waxaan dabadeed qiimeyneynaa in heshiis waxbarasho uu yahay qaab fiican oo kor loogu qaadi karo fursadahaaga ku aaddan in aad shaqo heshid.
Haddii aad waxbaraneysid waqtiga barkiis ama in ka badan kaalmo- iyo deyn waxbarasho ayaad ka codsan kartaa Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Haddii aad waxbarashada ka barbar shaqeyneysid mushaar ayaad dabcan qaadaneysaa mushaar inta aad shaqeyneysid. Haddii aad qaadatid tababar shaqo ama ka qeyb qaadatid barnaamij kale waxaad xaq u leedahay aktivitetsstöd ama utvecklingsersättning, oo ay bixineyso Försäkringskassan.
Ceymis ayaad ku jirtaa marka aad leedihid heshiis waxbarasho. Ceymisyadu waxay ku xiranyihiin waxyaabaha aad ku hawlantihid, tusaale ahaan waxbarashada, shaqada ama barnaamijka.